CORBITION cryogenic tubes na-adabara na nchekwa nke ụdị ndụ dị ka ihe eji eri ihe nyocha ụlọ, nke arụpụtara site na polypropylene dị elu. Typesdị eriri eri abụọ dị maka nchekwa vial dabere na ọnọdụ: eri dị n'ime na eri mpụga. Mpempe akwụkwọ Cryogenic na-enwe ike ịchekwa usoro nchekwa na okpomọkụ dị ala dị ka -196 ℃. A na-etinye mgbanaka silicone na mkpuchi ịghasa iji gbochie mmetọ nke ịmịpụ mmiri nke na-emecha hụ na nchekwa nke ụdị na vial cryogenic.
Ihe mkpuchi agba agba dị na agba itoolu iji mee ka eriri vial cryogenic dị mfe ịmata. Akara ebe na ngụsị akwụkwọ doro anya na e biri ebi na-acha ọcha na tube elu maka ọrụ marking na calibrating. A na-etinye vial niile dị na Sorfa cryogenic na akpa na ịgba ọgwụ, enweghị RNase, enweghị DNase na ndị na-abụghị pyrogenic.
1.Ha usoro nke ngwaahịa nabatara dị elu-nghọta polypropylene ngwaọrụ, na-eguzogide ọgwụ -80 ~ 121 ℃. Uko gburugburu okpu imewe, na-abụghị na-egbu egbu O-mgbanaka nchebe iji gbochie leakage. Mgbe ị na-echekwa ihe atụ, okwesighi imeju ha iji zere mgbawa ọkpọkọ. Usoro a nke ngwaahịa nwere nkọwa atọ nke 0.5ml, 1.5ml na 2.0ml, na 7 agba mkpuchi dị.
2.The tube ahụ ka nke polypropylene ihe nwere ezi ala na-eguzogide okpomọkụ iji mee ka ngwaahịa kwụsie ike na gburugburu ebe obibi dị ala.
3.Can na-anagide ọnọdụ okpomọkụ dị elu na nsị dị elu.
Enwere ike ịhọrọ aru ahụ ma ọ bụ na-enweghị akara mmezi.
5.Ọ dịghị enzyme DNA / RNA, enweghị mmadụ DNA, enweghị endotoxin.
6.E nwere akara mgbaaka nke silicone n'etiti eriri nke mkpuchi anwụrụ na-acha ọkụ na nke ọkpọkọ, nke nwere ike ịkwado arụmọrụ arụmọrụ n'okpuru ụdị ọnọdụ ọjọọ niile.
7.Made si UPS Plastic Class VI Polypropylene.
8. Dị na 0,5 ml, 1.5 ml, 2 ml
Eri dị n'ime na eri nke mpụga maka nhọrọ
9.U dị n'ime ala maka oke ịrụ ọrụ olu
10.Low nchekwa nchekwa: -196 ka 121 ℃
Enweghị DNase, RNase-enweghị, na-abụghị pyrogenic
Akpachara ogwu ka o ruo SAL 10-6
MBA. Mpịakọta Nkọwa Okpu Mbukota / Ctns Ntughari nwa nwoke
PC0005 1.5ml Vetikal microtube Serew 8000 Nhọrọ
PC0006 2.0ml Vetikal microtube Serew 6000 Nhọrọ
PC0007 0,5ml Vetikal microtube Serew 8000 Nhọrọ
Nke gara aga: Viral DNA / RNA Ihe ntinye (Magnetic Beads)
Osote: Kalama reagent
0.5ml Cryogenic vials ọkpọkọ
1.5ml Cryogenic vials ọkpọkọ